MAQAL:Faroole socdaalkii gobolka Karkaar maxaa uga soo qabsoomay ?(DHAGEYSO) – SBC
MAQAL:Faroole socdaalkii gobolka Karkaar maxaa uga soo qabsoomay ?(DHAGEYSO)
Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Maxamed Faroole ayaa soo gabagabeeyey socdaal uu maalmihii la soo dhaafay ku marayey deegaano ka tirsan Gobolka Karkaar sida Qardho, Dhuudo, Rako iyo meelo kale waxaana uu dib u soo laabtey isaga iyo wafdigii la socdey magaalada Garoowe.
Madaxweynuhu intii aanu soo gaarin magaalada Garoowe wuxuu ku hakaday degmada Dongoroyo ee gobolka Nugaal halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey, wuxuuna u jeediyey khudbad kooban oo uu kaga hadley waxyaabihii uu uga soo qabsoomay safarkiisii Gobolka Karkaar.
C/raxmaan Faroole waxaa kale oo uu ka hadley arimaha amaanka Puntland isagoo dadka reer Puntland u jeediyey digniin ku aadan arimaha amaanka, sidoo kale wuxuu ka hadley arimaha aftida loo qaadayo dastuurka cusub ee Puntland ee dhawaan lagu ansixin doono magaalada Garoowe.
Khudbada madaxweynaha ee uu kaga hadley arimahan oo dhan Link-ga audio ha hoose ka dhageyso.
HALKAN KA DHAGEYSO KHUDBADA MADAXWEYNE FAROOLE